Iimpuku zentembeko kunye neebhodi yezitshixo ekusebenzeni ngomnxeba, ngaba kufanelekile? | Iindaba zeGajethi
El i-telecommuting sele iqhelekile kwimisebenzi emininzi namhlanje, enyanisweni, kufanele ukuba sibeka phambili le ndlela yokusebenza ngaphezu kwabo bonke abanye xa kunokwenzeka njalo. Nangona kunjalo, uninzi lwabasebenzi lwalungakulungelanga ukujongana nethuba lokuseka umsebenzi ekhaya.
Izixhobo zekhompyuter ziye zalicandelo elibalulekileyo xa kufikwa ekusincedeni kumhla wethu wokusebenza, yiyo loo nto kwiActualidad Gadget kutshanje sizisa uhlalutyo olujolise kweli candelo. Sikuzisa uhlalutyo lwebhodi yezitshixo yeTrust kunye neempuku ukuze wazi ukuba yeyiphi efanelekileyo iimfuno zakho.
1 Ikhibhodi yeODY kunye nepakethi yemouse
2 Imouse engenazingcingo ye-Ozaa
Ikhibhodi yeODY kunye nepakethi yemouse
Eyona nto ilula kukuhlala ubheja kwibhodi yezitshixo kunye nepakethi esebenza "ngesandla" kwaye ilungelelanise ngokuzenzekelayo. Ke ngoko, ukuba uza kunyusa isinye Misela Umsebenzi we-automation yeofisi ekhaya, ezi phakheji zezona zibalaseleyo.
Iimpawu ezininzi ezinje ngeLogitech, iTrust okanye iGenius zibonelela ngolu hlobo lwe-combo enezitshixo kunye neempuku. Ingcebiso yethu kukuba ukuhlala ixesha elide kuhlala kuhamba kwiimveliso ezenziwe ngeplastikhi emnyama kwaye kukhanye ngokusemandleni.
Kule meko sigxila kwimodeli ye-ODY yeTrust, ikhibhodi kunye nepakethe yemouse enenkqubo ethe cwaka ebaluleke ngokukodwa ekusebenzeni ngomnxeba. Endlwini yethu siza kufuna ukuthula ngakumbi kuba kwindawo enoxinzelelo ngakumbi kunesiqhelo kufuneka siyenze imisebenzi yethu kwaye sikuphephe ukuphazamisa abantu esihlala nabo okanye amalungu osapho.
Zombini imouse kunye nebhodi yezitshixo kule meko zinamaqhosha kunye namaqhosha e-membrane ethuleyo. Emva kovavanyo lwethu kufuneka sitsho ukuba ikhibhodi ithule ngokukodwa, nangona kunjalo, inokwenziwa kunqabile kumsebenzisi oqhelekileyo ngenxa yokungabikho kwengxelo esinokuthi siqaphele xa sibacinezela.
Thenga iTrust keyboard kunye nepakethi yemouse ngee-euro ezingama-24,99 kuphela
Ngokuphathelele kwikhibhodi, Sifikelela kwi-13 yezitshixo ezichaziweyo kwangaphambili kuzo zombini iOfisi yeMicrosoft kunye nolawulo lwemultimedia. Ngokucacileyo, le keyboard, njengazo zonke ezijolise ekusebenzeni ngomnxeba, inebhodi enezitshixo ezinamfutshane kunye nokukhiya. Ngasekunene sinezibane ezintathu ze-LED Oko kuyakubonisa ukusebenza okufanelekileyo.
Ikhibhodi, yenxalenye yayo, iyamelana nokuchitheka, Oko kukuthi, akufuneki sikhathazeke ukuba siwisa ikomityi yamanzi okanye ikofu kuyo, nangona kungenxa yezizathu ezicacileyo esingakhange sikwazi ukulivavanya eli nqaku.
Zombini ikhibhodi kunye nempuku zixhunyiwe kwizibuko elifanayo le-USB. Kwimeko yegundane, ineengubo zerabha emacaleni ukuze ikhululeke kwaye ityibilike kancinci. Iqhosha phezulu ukulawula isantya sesikhombisi, ewe, siphose amaqhosha asecaleni ukufikelela ngokukhawuleza.
Ngasemva, ikhibhodi inenkqubo yokuphakama, nangona kunjalo, ndincoma ukuba uyisebenzise kwimowudi "ethe tyaba" rhoqo ukuthintela iintlungu ezihlahleni esiye sanamava ngazo. Ngaphandle koko, ikhibhodi inesakhiwo esifanelekileyo ukuba nje uqhela ukuchukumisa kunye nokuchasa.
Le keyboard kunye nempuku ODY iTrust iyahambelana zombini iiWindows kunye neMacOS kunye neChannel OS, Ke ngokukubanzi, asizukufumana ubunzima ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla. Ixabiso elinconyelweyo lemveliso zii-euro ezingama-24,99, ungayithenga ngexabiso elifanelekileyo kwiAmazon LE LINK.
Imouse engenazingcingo ye-Ozaa
Ngoku sithetha ngemouse, indawo yesibini enkulu yolawulo lwekhompyuter yethu, kule meko imodeli Ozaa de Ithemba. Ngokucacileyo sikufumanisa ukuba kufana okufanelekileyo kwezinye iimpuku eziphezulu ezivela kwezinye iinkampani ezikhuphisanayo, into enganyanzelekanga ukuba ibe yindawo engalunganga, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo ixabiso.
Le mpuku yiyo Iplagi kunye nokudlala kwaye inesamkeli somqondiso se-USB, esigubungela ithiyori ukuya kuthi ga kwiimitha ezili-10, Into esingazukuyijonga, kuba ngekhe siyibone ikhusi kuloo meko. Ayinayo iBluetooth okanye naluphi na olunye uhlobo lwetekhnoloji engenazingcingo, ke uya kuhlala kwizibuko le-USB.
Inomphezulu we Isibonisi sebhetri i-LED eziza blink ebomvu. Impuku ingena "Indlela yokulala" ukugcina ibhetri ngokuzenzekelayo, kwaye iya "kuvuka" ngokucinezela naliphi na iqhosha okanye wenze intshukumo ngequbuliso. Ngaphandle kwayo yonke le nto, ukuqaqambisa kukuba sifumana ibhetri ye-lithium egcwalisekayo kuyo.
Njengakwikhibhodi kunye nempahla yekiti esithethe ngayo ngaphambili, kule Sikwafumana amaqhosha athulisiweyo kuzo zonke iimeko. Yenziwe ngeplastikhi kuphela enezinye iinkcukacha ezincinci kwialuminium, amacala enziwe ngesilicone yesilivere ukuphucula ukubambelela.
Ngokucacileyo iyimveliso elula ngenxa yeplastiki eyenziweyo, nangona kunjalo, mna ngokwam ndifumana amaqhosha asecaleni eluncedo kakhulu, apho siya kuba nakho ukuhamba "ngasemva" kunye "ngokulandelayo" kunye nevili elisecaleni ukuze sikwazi ukuhamba kamnandi ngakumbi Ngamaxwebhu. Ewonke, amaqhosha amathandathu ukuphucula imveliso.
Singayithenga ngemibala emithathu eyahlukileyo, eluhlaza okwesibhakabhaka, emnyama nomhlophe. Njengoko ubona, iyunithi esiyivavanyileyo kuhlalutyo lwethu yeyomhlophe, nangona kufuneka nditsho ukuba luhlaza okwesibhakabhaka mhlawumbi yeyona nto inomtsalane, nangona kunjalo, ndithatha ithuba ukubonisa ukuba kufuneka sihlale sihamba mnyama xa sifuna ukuhlala nokucoceka.
Asinalo uqikelelo oluthile ngokubhekisele kubomi bebhetri, ngexesha lovavanyo lwethu ngaphezulu kweveki besingafunanga ukuyibiza. Ubunzima bebonke bungaphezulu nje kwe-100 yeegramu, ke kulungile, kwaye iyahambelana ngokupheleleyo zombini i-Chrome OS kunye neWindows kunye neMacOS.
Le mpuku ixabisa malunga ne-euro ezingama-49,99, nangona kunjalo ikwangoku unike iAmazon kwiyunithi yayo emnyama ngee-euro ezingama-39,99 kuphela, emele isaphulelo sama-20%. Ungayithenga NGENXA yeXabiso ngexabiso elifanelekileyo kunye nazo zonke iziqinisekiso.
Ezi ibe zizindululo zethu emva kovavanyo lweemveliso zeTrust zokwenza umsebenzi wonxibelelwano ngomnxeba, sinethemba lokuba ngoku unoluvo olucacileyo malunga nendlela yokuhlangana Umsebenzi ekhaya ngaphandle komzamo omkhulu kunye neemveliso ezikumgangatho ofanelekileyo, ulinde ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Iimpuku zentembeko kunye neebhodi yezitshixo zomsebenzi wonxibelelwano, ngaba kufanelekile?
Izixhobo ezikwi-Intanethi ukubeka imvelaphi emhlophe kwifoto